Tufaaxa - Waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 11)
Waxay jabiyaan muraayadda Bakhaarka Apple waxayna xadaan alaabooyin qiimahoodu gaarayo $ 300.000
Xatooyada ka socota dukaamada Apple ayaa sii socota in kastoo ay hoos u dhacday sanadihii la soo dhaafay. Markan waxay ahayd markiisa dukaan rasmi ah oo ku yaal Australia
Sida loo rogo sawirada adoon isticmaalin Falanqeynta
Sawirada wareega ee Raadiyaha ayaa aad ugu fudud Mac-da haddii aanan rabin inaan adeegsanno Falanqeynta. Waxaan ku tusaynaa laba hab oo deg deg ah oo fudud oo aad ku samayn karto.
Ka raadi bogagga taabashada 'Bar Bar' ee 'Mac' ama booqo boggaga aad ugu jeceshahay
U adeegso Taabashada Bar si aad u dhex mariso boggaga internetka ee aad ugu jeceshahay ama aad u raadiso bogag cusub. Hawlaha qaar ka mid ah bartaan taabashada ah ee 'MacBook Pro'
Apple si loo hagaajiyo ilaalinta sirta Siri
Siri waxay ku jirtaa geeddi-socodka hagaajinta asturnaanta iyo Apple way cadahay in tani ay tahay xuquuqda aasaasiga ah ee dadka
Ka faa'iideyso fariinta leh bar taabashada
Waxaan ku tusineynaa xeelado dheeri ah si aad uga faa iideysato Barta taabashada ee MacBook Pro-kaaga.
«Kaarka Apple ayaa halkan jooga» ogeysiis cusub oo kaarka Apple ah
Ogeysiis cusub oo ay Apple ku daabacday kanaalkeeda Youtube. Xaaladdan oo kale, kaarka amaahda Apple waa hal-ku-dheggeeda.
Taabo Baarka. Dhex mar sawirradaada oo si dhakhso ah u saxar
Waxaan ku tusineynaa xulashooyin aan ku heli karno Taabashada Bar ee MacBook Pro-ga oo laga yaabo inaadan ogeyn
Falanqeeyayaasha ayaa si aad ah ugu xoog badan Apple TV +
Falanqeeyayaasha qaar waxay saadaalinayaan ku dhowaad 12 milyan oo macaamiil u ah Apple TV + inta lagu gudajiro sanadkan 2020 waxaana la filayaa inay kororto ilaa 21 milyan sanadka 2021
'Acronis True Image 2020' ayaa halkan u ah in lagu kaydiyo daruurta
Sawirka 'Acronis True Image 2020' ayaa halkan loogu talagalay in lagu kaydiyo daruurta isla markaana lagu sameeyo nidaamyo ka horumarsan kan Mashiinka Waqtiga
Baro Final Cut Pro X kula YouTuber iJustine
Baro Final Cut Pro X adiga oo adeegsanaya YouTuber iJustine, mid kasta oo ka mid ah tillaabooyinka isku socodka shaqada, isla waqtigaas waxaad qabanaysaa mashruuca
Logitech wuxuu furayaa MK470 Slim Combo, kumbuyuutar is haysta, kumbuyuutar aad u khafiif ah iyo jiir
Logitech wuxuu soo bandhigayaa kumbuyuutar cusub iyo jiir leh qaab yar. MK470 Slim Combo Combo
Apple waxay cusbooneysiisaa dekeddeeda si ay ula jaanqaado 4K iyo HDR
Apple waxay cusbooneysiisaa dekeddeeda si ay u taageerto 4K iyo HDR dekedda HDMI. Qalabkani wuxuu la jaan qaadi karaa iPad Pro
Waxay kuu soo diri doonaan waraaqo fara badan si aad u tijaabiso beta-ka dadweynaha
At Apple waxay u dirayaan emayl ballaaran oo loogu talagalay dadka isticmaala si ay u tijaabiyaan noocyada beta ee dadweynaha ee aaladahayaga.
FileMaker ayaa dib u dhashay sida Claris
Akhbaar muhiim u ah isticmaaleyaasha FileMaker ayaa ah inay hagaajineyso adeegyadeeda isla markaana loogu magac daray Claris.
Sida loo joojiyo aragtida yar ee kumbuyuutarka ee shaashadaha Mac
Haddii aad ku daashay aragtida thumbnail ee horudhaca shaashadaha aad ku qaadaneyso Mac-gaaga, waa kuwan sida loo joojiyo.
Intel wuxuu soo bandhigayaa 10-Nanometer XNUMX-Generation "Ice Lake"
Intel wuxuu soo bandhigayaa 10-nanometer jiilka XNUMX-aad ee "Ice Lake". Lagu sameeyay qeexitaannada ay u baahan yihiin Mac-yada hadda jira.
Tariffs Mac Pro, MacBook Pro 16 ″ iyo wax kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan ku galnay bishii Oggosto xoog waxaanan horey u haynaa qodobka koowaad ee bishaan oo ay kujiraan wararka ugu muhiimsan usbuuca ee dunida Apple.
Afaraad macOS Catalina dadweynaha beta ayaa hadda la heli karaa
Beta beta afaraad ee macOS Catalina hada waxaa heli kara dhamaan isticmaaleyaasha kuwaas oo qeyb ka ah barnaamijka beta beta ee bulshada.
Apple Pay waxay dhulka u cunaysaa adeegyo laxiriira sida PayPal
Apple-ka waxay qaataan laabta fulinta iyo hagaajinta Apple Pay. Adeegani xitaa wuu ka sarreeyaa PayPal bixinta.
WatchOS Beta 5 loogu talagalay horumariyeyaasha iyo iOS, macOS, iyo tvOS betas dadweynaha
Noocyada 'beta' ayaa sii wataya soo-saareyaasha iyo isticmaaleyaasha diiwaangashan ee barnaamijka beta bulshada. Waxaan rajeyneynaa noocyada ugu dambeeya dhowaan
Maalgelinta kharashka 0 waxay umuuqataa inay ku egtahay Apple
8da Ogosto, shirkadda Cupertino way joojin kartaa bixinta maalgelinta kharashka 0 ee dukaamadeeda iyo degelkeeda, markaa ka faa'iideyso hadda haddii aad u baahato.
Cusbooneysiinta Pixelmator Pro oo waxay ku dhex jirtaa Sawirada loogu talagalay Mac kordhin ahaan
Pixelmator Pro waa la cusbooneysiiyay oo lagu daray Sawirada loogu talagalay Mac ahaan kordhin ahaan. Tifatirka ayaa hada si dhakhso leh ugu mahadsan.
Xafiisyada cusub ee Apple ee suurtogalka ku ah Vancouver, Canada
Dhismayaal dhaadheer oo cusub oo laga dhisayo magaalada Vancouver ee dalka Kanada ayaa ku jiri kara indhaha Apple si ay u rakibaan dhowr shaqaale ah.
"Behind the Mac" iyo "Shot on iPhone" oo loo magacaabay 71-aad Emmy
Apple waxay heshay magacaabis qaar ka mid ah abaalmarinta Emmy ee sanadkan. Shirkadda waxaa loo magacaabay dhowr gaagaaban iyo karaoke carpool
Apple Park waxaa lagu qiimeeyay in ka badan 4.000 milyan oo doolar
Canshuuro badan ama canshuur yar? Apple Park waxay soosaartaa xaddiga canshuuraha ah qiimeynta golaha magaalada.
Apple waxay sii deyneysaa nooca 87 ee Safari Technology Preview
Waxaan horeyba u haysannay nooca 87 ee biraawsarka tijaabada ah ee Falanqaynta Teknolojiyada Safari. Qaabkan cusub hagaajinta ayaa lagu daray guud ahaan.
Miyaad u maleyneysaa inaan heli doono AirPod cusub dabayaaqada sanadkan?
Maxaad u maleyneysaa wararka xanta ah ee sheegaya in Apple ay bilaabi karto AirPods cusub oo biyaha u adkeysan kara sanadkan. Ka jawaab su'aalaha.
MacOS 10.14.6 Mojave beta afraad ayaa loo sii daayay horumariyeyaasha
Apple wuxuu sii daayaa beta-kii afaraad ee macOS 10.14.6 Mojave ee loogu talagalay horumariyeyaasha. Waxay diiradda saareysaa hagaajinta cayayaanka laga helay macOS 10.14.5 Mojave
Sida loo weyneeyo si loo ballaariyo bogagga shabakadda ee Safari
Haddii aad rabto inaad wax ka beddesho aragtida shabakadda Safari ee aad ku jirto, halkan waxaa ku yaal xeelad yar oo lagu ballaadhinayo oo lagu dhimayo cabbirkeeda.
Xiaomi ayaa gebi ahaanba ka xaday xayeysiinta Apple si ay u muujiso "Mimoji" cusub
Xiaomi waxay si buuxda u qaadan lahayd mid ka mid ah ogeysiisyada Apple soo bandhigeedii ugu dambeeyay si ay ugu muujiso "Mimoji" cusub 'Xiaomi Mi CC9', ogow!
Qalabka Eve ayaa sidoo kale ku dari doona isku xirnaanta Bluetooth
U diyaari Mac-kaaga inuu ka boodo 32-bit ilaa 64-bit codsiyada macOS Catalina (iyo II)
U diyaari Mac-kaaga inuu ka boodo 32-bit ilaa 64-bit codsiyada macOS Catalina (iyo II). Waxaan arki doonaa qaababka kala duwan ee lagu ogaan karo.
Sida looga tirtiro barnaamijyada asaasiga ah ee ka socda Apple Watch ilaalada watchOS 6
Iyada oo watchOS 6 ay macquul tahay in laga tirtiro codsiyada udhaxeeya Apple Watch. Waxaan ku tusineynaa cashar fudud oo aan ku sharaxeyno sida looga tirtiro barnaamijyada Apple Watch
Socdaalka Up Next Live ee xagaagan oo ay la socoto Apple Music
Apple wuxuu muujinayaa liiska bakhaarada iyo heesaayaasha oo buuxin doona riwaayadaha Heerka Labaad. Xaaladdan oo kale, fannaaniin badan oo caan ah oo ku qoran boodhka
U diyaari Mac-gaaga inuu ka boodo 32-bit ilaa 64-bit codsiyada macOS Catalina (I)
U diyaari Mac-gaaga inuu ka boodo 32-bit ilaa 64-bit codsiyada macOS Catalina (I). Waan arki doonaa barnaamijyada aan ku habboonayn maanta.
Waa maxay macnaheedu iyo sidee baan uga saarnaa astaanta astaamaha su'aasha Dock-ka?
Waxaan ku tusineynaa waxa ay ka dhigan tahay iyo sida aan si fudud uga saari karno astaan ​​ka muuqata meeshayada Mac-da.
Sida loo iibsado lambarrada barnaamijka ee ku yaal Mac App Store
Haddii aad haysato koodhka codsi ee Mac oo aynaan garanayn sida loogu soo furto dukaanka arjiga Mac, waxaan kuu sharxi doonaa tallaabo tallaabo sida loo sameeyo.
Sida looga hortago Safari inay si toos ah u furato faylasha aan soo degsano
Haddii aad ka daashay xiridda daaqadaha ay macOS furayso mar kasta oo aan feyl ka soo dejino Safari, waxaan ku tusi doonaa sida looga hortago in dib loo furo
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa Keynote, Bogagga iyo Lambarada macOS oo leh astaamo badan oo cusub
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa Keynote, Bogagga iyo Lambarada macOS oo leh astaamo badan oo cusub iyo is-dhexgal lala yeesho codsiyada kale sida Sawirrada
Podcast 10 × 34: Xilliga ugu dambeeya ee falanqaynta wararka Apple
Waxaan idinkaga tageynaa qeybtii ugu dambeysay ee xilli #podcastapple oo maqal ah. Waan soo laaban doonnaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad filayso.
Tim Cook wuxuu khudbad dhiirigalin ah ka jeediyaa Jaamacadda Stanford
Khudbad dhiirrigelin ah oo uu jeediyey madaxa shirkadda Apple Tim Cook, horteeda ardayda jaamacadda Stanford. Cook wuxuu ku jiray isla marxaladda Jobs 14 sano kadib
Sida looga baxo barnaamijka beta ee macOS Mojave ama macOS Catalina
Sideen uga bixi karnaa barnaamijka beta ee loogu talagalay macOS Mojave ama horumariyeyaasha macOS Catalina ee ku yaal Mac-ga
Apple wuxuu sii daayaa macOS Mojave 10.14.5 balastar si loo xalliyo arrinta Boot Camp ee kombiyuutarada Fusion Drive
Apple wuxuu sii daayaa macOS Mojave 10.14.5 patch si loo xalliyo arrinta Boot Camp ee kombiyuutarada Fusion Drive ee saameeya abuurka
Twitter-ka loogu talagalay macOS wuu soo laabtay mahadsanidiisa mashruuca Hannaanka
Twitter-ka loogu talagalay macOS wuu soo laabtay mahadsanidiisa mashruuca Hannaanka. Nooca cusub wuxuu la imaan doonaa shaqooyin la mid ah nooc kasta oo kale oo Twitter ah
Ma ogtahay in aluminiumka kiiska MacBookga iyo Mac mini 100% dib loo warshadeeyay?
Apple waxay sii wadaa inay maalgashi ku sameyso lacag iyo dadaal dib-u-warshadaynta taasna waxay caddeyn u tahay in hadda MacBook Air iyo Mac mini ay dib u rogeen qashin
Gawaarida kumbuyuutarka si loo maareeyo Dock-ka si dhakhso leh
Haddii aad sida caadiga ah la shaqeysid Mac's Dock-kaaga, waxay u badan tahay in toobiyeyaasha aan ku tusinnay qodobkan ay aad waxtar u leeyihiin.
Apple waxay xaqiijineysaa luminta Dashboardka ku yaal macOS Catalina
Apple waxay xaqiijineysaa luminta Dashboardka ku yaal macOS Catalina. Desktop-kan ayaa soo jiray tan iyo markii OS X Tiger iyo Apple ay ka saareen 14 sano kadib
BetterTouchTool 3 waxay la timid isugeyn gebi ahaanba la cusbooneysiiyay
BetterTouchTool 3 waxay la timid isugeyn gebi ahaanba la cusbooneysiiyay. Astaamaha waxay la mid yihiin noocyadii hore.
Xerada "Apple Camp" waxay furi doontaa meelaha 17-ka Juun
Meelaha laga diiwaangeliyo Apple Camp waxay furmi doonaan 17-ka Juun. Kaamamkan waxaa loogu talagalay wiilasha iyo gabdhaha u dhexeeya 8 iyo 12 sano jir
Sida loo rakibo macOS Catalina beta 1 adoon noqon horumariye
Waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo macOS Catalina beta 1 adoon noqon horumariye. Nidaam fudud oo dhakhso leh oo loogu talagalay isticmaale kasta
Raac qodobka WWDC 2019 ee halkan ka socda!
Maanta waxaan haynaa qodob muhiim ah oo ma seegi kartid matalaadda aan ka imid Mac ee baahinta tooska ah ee tooska ah. Na raac.
Sawirradii ugu horreeyay ee hareeraha Xarunta Shirarka McEnery ee San José
Sawirradii ugu horreeyay ee hareeraha Xarunta Shirarka McEnery ee San José ayaa durba bilaabay inay yimaadaan
Pixelmator Pro waxaa si buuxda loogu dhex dari doonaa macOS Sawirada
Pixelmator Pro ayaa si buuxda loogu dhex dari doonaa Sawirrada ku jira macOS nooca 1.4, oo la sii deyn doono dhammaadka Juun.
Apple waxay dib u cusbooneysiineysaa WWDC sheekooyin horumarineed
Apple horeyba waxay indhaheeda ugu jeedisay WWDC ee soo socota waxayna na tusaysaa faahfaahinta qaar ka mid ah horumariyeyaasha ka soo qayb geli doona dhacdadan sanadlaha ah
10 × 32 Podcast: Hal Asbuuc ilaa WWDC 2019
Waxaan u daynay dhacdo cusub oo ah #PodcastApple oo loogu talagalay isticmaaleyaasha na soo raaca iyo dhammaan kuwa maanta bilaabaya
Movist wuxuu barnaamijkiisa Pro ku bilaabayaa degelkiisa si looga fogaado xayiraadaha Mac App Store
Movist wuxuu barnaamijkiisa Pro ku bilaabayaa degelkiisa si looga fogaado xayiraadaha Mac App Store. Noocan Pro waa lacag la'aan haddii aad ka baxdo asalka.
Sida loo furo xiriiriye tab cusub Safari
Furitaanka xiriir kasta oo ka socda bogga degsi tab cusub waa geedi socod aad u dhakhso badan haddii aan isticmaalno kiiboodhka. Waxaan ku tusineynaa xeelad yar oo aad ku sameyso.
Sida loo wareejiyo Handoff ama loogu dabo macOS
Waxaan ku tusineynaa talaabada ay tahay inaad ku sameyso Mac-gaaga hadii aad rabto inaad dhaqaajiso ama aad joojiso shaqada Handoff
Ku qaado shaashadda shaashadda barnaamijka 'LightCapture app' ee Mojave
Ku qaado shaashadda shaashadda barnaamijka 'LightCapture app' ee Mojave. LightCapture wuxuu nuqul ka bixiyaa sawirka la xushay sabuuradda.
Ku dheji xoogaa amar ah iCloud Keychain oo ka socda macOS
Ku dheji amar iCloud Keychain macOS. Kalasooco ereyada sirta ah ee adeegyada kala duwan, tirtir inta ugu yar ee la isticmaalay.
Sida loo dhaqaajiyo Ha ku mashquulin toobiye kumbuyuutar
Firfircoonida habka 'Ha dhibin' waa mid aad u fudud oo dhakhso leh in lagu dhex maro toobiye kumbuyuutar aan hoosta ku tusno.
20-ka Juun, Dukaanka Apple ee ku yaal Passeig de Gràcia ee magaalada Barcelona ayaa mar kale la furi doonaa
Bakhaarka ku yaal Passeig de Gràcia ee magaalada Barcelona ayaa albaabada loo furi karaa June 20 sida lagu sheegay warbixin
Sida Ugu Dhaqsiyaha Badan Ee Loogu Gello Bogagga Shabakadda ee Dhawaan Furmay Safari
Si dhakhso leh u furitaanka bog dhowaan la xiray Safari way fududahay haddii aad taqaanid sida.
Steve Jobs wuxuu rabay inuu soo saaro kaarkiisa amaahda sanadkii 2004
Maamulaha Apple Steve Jobs qudhiisu wuxuu maanka ku hayey inuu soo saaro kaarka amaahda ee loo yaqaan Apple Card. Iyada oo ay helaan music bilaash ah iTunes
Dukaamada Apple ayaa iibiya shaashadda LG 23,7-inji ah
Dukaamada Apple ayaa si aamusnaan ah u iibiya shaashadda LG 23.7-inji ah. Shaashadda kama muuqaneyso buugga wax lagu qoro mana lagu soo bandhigo Apple Store
Kuqor waxqabadkaaga Mac barnaamijka cusub ee Timemator
Kuqor waxqabadkaaga Mac barnaamijka cusub ee Timemator. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku cabirto isticmaalka feyl, codsi ama galka saacad-saacad.
Angela Ahrendts waxay ku biirtay guddiga agaasimayaasha Airbnb
Saxiixa Angela Ahrendts ee shirkadda Airbnb ayaa rasmi laga dhigay. Xaaladdan oo kale, wuxuu ku biirayaa guddiga maamulka shirkadda
Sonos wuxuu kudarsanayaa taageerada caawiye kaaliyaha Google ee Mareykanka
Sonos wuxuu ku darayaa taageerada Kaaliyaha Google ee Kaaliyaha Google ee Mareykanka. Goor dhaw ayaa laga heli doonaa dalal kale